Narinjara (http://www.narinjara.com/burmese/) | GandaWIN
Home Myanmar Websites Myanmar Business News Narinjara (http://www.narinjara.com/burmese/)
နိရဉ္စရာ ၀ဘ်ဆိုဒ်တွင် နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသော စီးပွားရေး သတင်းများအပြင် ပြည်တွင်း စီးပွားရေး
သတင်းများ၊ နယ်စပ်စီးပွားရေးဇုံမှ သတင်းများ အစရှိသည့် သတင်းတို့ကို
အများဆုံး ရေးသား ဖော်ပြလျှက် ရှိသည်။ နိရဉ္စရာ ၄င်းဝဘ်ဆိုဒ်သည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်မှ စီးပွားရေး သတင်းများနှင့် ရခိုင်နယ်စပ်ဘက်မှ
စီးပွားရေး သတင်းများကို အဓိက အသားပေး ဖော်ပြသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။
နိရဉ္စရာ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ အောင်မြင် လူဖတ်များသော ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Narinjara is an independent Arakanese News Agency in Myanmar. Narinjara provides updates on Myanmar local news, international news, history, interviews, Myanmar Politics, Myanmar’s Business news, etc.
Business news such as New Inland port proposed in Maungdaw, Burma-Bangladesh trade talks scheduled for January, Biman resumes Dhaka-Yangon flight, Burma wanting trades with northeast India, etc. Narinjara isasuccessful online website which has gained many readerships in Myanmar.
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေချန်ခဲ့ပြီး အားအင်ပြည့်ဝတဲ့နေ့ရက်တွေဆီ ချီတက်နိုင်စေမယ့်နည်းလမ်းများ
မိတ်ကပ်ဓာတ်မတည့်မှုတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်လေးများ
သင့်ကိုယ်သင်ချစ်ရင် သင့်တန်ဖိုးကို သင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပါ။
၂ဝ၁၉ ရဲ့ အပတ်စဉ်ဂန္ထဝင်ဗေဒင် ( မေလ ၂၇ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ၂ ရက်နေ့အထိ)